Umzila Womzabalazo eThekwini | Amandla!
Umzila Womzabalazo eThekwini
Udaba olwashicilelwa kwi-Daily News
UMasipala waseThekwini usuhambe ibanga elide ekwakheni “umzila womzabalazo” eThekwini okuhloswe ngawo ukuhlonipha abantu nezindawo kuleli dolobha ezaba neqhaza ekuzuzweni kombuso wentando yabantu. Le phrojekthi iyingxenye yohlelo lukazwelonke oluqalwe nguMkhandlu Wamagugu kaZwelonke eNingizimu Afrika yokuqhakambisa lezi ndawo emphakathini kanjalo namaqhawe omzabalazo wenkululeko nentando yabantu eNingizimu Afrika.
Kwethulwe izindawo ezingamashumi amathathu eThekwini ezizokuba yingxenye yalo mzila, ezibandakanya uWarwick Avenue, lapho kwasuswa khona ngenkani amakhulu emindeni yabomdabu waseNdiya nguhulumeni wobandlululo, inkundla iCurries Fountain, lapho kwethulwa khona ubumbano lwezinyunyana zabasebenzi iCosatu, namahhovisi egatsha lezokuphepha elalesatshwa kakhulu i-Security Branch.
Indawo eyayingamahhovisi eSecurity Branch
Ngokwemibiko eyethulwe ekomidini lezomphakathi nezokuhlinzekwa kwezidingo zomphakathi muva nje, omaka balezi zindawo bazofakwa ezindaweni ezingu-18 kulo nyaka, kuthi ezinye ezingu-12 ziphothulwe ngonyaka ozayo. Omaka balezi zindawo, abachazwe njengama “wayfinder pylons”, bazobekwa kumaphevumenti budebuduze nezindawo ezithintekayo.
Umaka ngamunye uzokuba nendatshana echazayo ngesiNgisi nangesiZulu kanjalo nesithombe esichaza ukubaluleka kwendawo.
Funda udaba olusiphelele ngesiNgisi…
Funda ngesiZulu ngaphansi:
DAILY NEWS – February 2016
EThekwini – UMasipala waseThekwini usuhambe ibanga elide ekwakheni “umzila womzabalazo” eThekwini okuhloswe ngawo ukuhlonipha abantu nezindawo kuleli dolobha ezaba neqhaza ekuzuzweni kombuso wentando yabantu.
Le phrojekthi iyingxenye yohlelo lukazwelonke oluqalwe nguMkhandlu Wamagugu kaZwelonke eNingizimu Afrika yokuqhakambisa lezi ndawo emphakathini kanjalo namaqhawe omzabalazo wenkululeko nentando yabantu eNingizimu Afrika.
Ngokwemibiko eyethulwe ekomidini lezomphakathi nezokuhlinzekwa kwezidingo zomphakathi muva nje, omaka balezi zindawo bazofakwa ezindaweni ezingu-18 kulo nyaka, kuthi ezinye ezingu-12 ziphothulwe ngonyaka ozayo.
Omaka balezi zindawo, abachazwe njengama “wayfinder pylons”, bazobekwa kumaphevumenti budebuduze nezindawo ezithintekayo.
Ngaphezu kwalokhu, umaka ngamunye uzokuba nekhodi ye-QR, ezokwenza ukuthi abantu abanamaselula esimanje akhombisa ibalamdwebo bakwazi ukushaya ikhodi ukuze bakwazi ukuthola ulwazi oluthe xaxa ngendawo leyo.
Izindawo eziyisihlanu zingaphandle kwenkaba yeDolobha, kanti ezinye ezingu-25 zisebangeni elibalelwa ku-1km ukusuka kwenye, kanti ibanga phakathi kwalesi zindawo ezingu-25 lingaphezudlwana kuka-6km.
Ngokwalo mbiko, yize abantu abavakashela lezi zindawo zomlando bezozikhethela bona indlela abazoyihamba njengoba bezoziqokela lezo zindawo okuyizona abafisa ukuzibona, umnyango wezokugcinwa kwamagugu kuMasipala wona ubafake izinombolo labo maka balezi zindawo ngokulandelana kwazo kusukela KwaMuhle, kusetshenziswa ibanga elifishane ukudlulela endaweni eseduze elandelayo.
“Inhloso enkulu yalo mzila womzabalazo wedolobha ukuhlonipha abantu abamele izinhlangano eziningi ezahlukene abanikela ngempilo yabo ukufezekisa iphupho lethu lenkululeko,” kusho uGuy Redman oyiphini leNhloko eMnyangweni wakwaLibraries and Heritage kuMasipala waseThekwini.
“UMzila Wamagugu Enkululeko kaZwelonke uhlose ukuqinisekisa ukuthi abantu bakithi abasha namuhla, kanjalo nezizukulwane ezizayo, bayakubona ukuzinikela okwenziwa ngabesifazane nabesilisa abavela nxa zonke ukusizuzela amalungelo esinawo sonke eNingizimu Afrika namuhla,” usho kanje.
URedman uthe isigaba sokuqala sokuhlola salo mzila kuMasipala waseThekwini sizokwethulwa kusetshenziswa lezi zindawo, ngemuva kwalokho kuzobe sekwenatshelwa nakwezinye izindawo.
ITheku libeke eceleni isabelomali sokudweba izimpawu nomaka balo mzila, kanjalo ne-website eyakhelwe lokhu ebandakanya ne-digital map ukuze abayisebenzisayo bakwazi ukubheka kalula lezi zindawo.
Le phrojekthi iqanjwe ngegama elithi “Amandla: The Liberation Heritage of Durban’, kanti inophawu oluyikhombisayo lwesibhakela esiphakanyisiwe esibomvu.
URedman uthe iTheku liyaqhubeka futhi nokwakha indawo yesikhumbuzo somlando wokufika kwabomdabu baseNdiya bokuqala eThekwini ngo-1860.
IKomidi Eliphezulu loMkhandlu muva nje livumile ukuba kukhishwe imali engu-R4.8 million wakwakha isichuse esiyingxenye yalesi sikhunbuzo. URedman uthe indawo yalesi sikhumbuzo izokuba bude buduze naseShaka Marine World.
Izindawo zomzila wamagugu omzabalazo yilezi:
KwaMuhle Museum: 130 Bram Fischer Road (Okwakungu-Ordnance Road)
Cartwright Flats: Eduze nerenke yamatekisi kuCartwright, ebheke kuJohannes Nkosi Street (okwakungu-Alice Street)
Beatrice Street YMCA / Bantu Social Centre: 29 Charlotte Maxeke Street (okwakunguBeatrice Street)
United Congregational Church of South Africa /SASO offices: 86 Charlotte Maxeke Street (okwakungu-Beatrice Street)
St Aidan’s Mission Hospital: 133 ML Sultan Street (okwakungu-Centenary Road)
Sastri College: Winterton Walk
Curries Fountain Stadium: 24 Winterton Walk
Abasuswa kuWarwick Avenue – The ‘Duchene’: Winterton Walk kuya ku-Berea Road
Himalaya House: 165 Julius Nyerere Avenue (okwakungu-Warwick Avenue)
Early Morning Market: ekhoneni likaDavid Webster Street noJulius Nyerere Avenue (okwakungu- Warwick Avenue)
Victoria Street Market: ekhoneni likaFishmarket Street noBertha Mkhize Street (okwakungu-Victoria Street)
Victoria Street beerhall (eMatsheni): ekhoneni lika Fishmarket Street noBertha Mkhize Street (okwakungu-Victoria Street)
Surat Hindu Association: 129 Bertha Mkhize Street (okwakungu-Victoria Street)
St Aidan’s Mission Clinic: 49 Cross Street
Gandhi Memorial: 95 Dr Goonam Street (okwakungu-Prince Edward Street)
Kapitan’s Balcony Hotel: ekhoneni likaBertha Mkhize Street (formerly Victoria Street) noDr Yusuf Dadoo Street (okwakungu-Grey Street)
Juma Masjid: ekhoneni lika Denis Hurley Street (okwakungu-Queen Street) noDr Yusuf Dadoo Street (okwakungu-Grey Street)
Gandhi Library: 140 Denis Hurley Street (okwakungu-Queen Street)
Denis Hurley Centre: 1 Cathedral Close
Red Square: ekhoneni likaDr Monty Naicker Street (okwakungu-Pine Street) noDr Yusuf Dadoo Street (okwakungu-Grey Street)
Lakhani Chambers: 2 Saville Street
Diakonia: 20 Diakonia Avenue (okwakungu-St Andrews Street)
Durban City Hall: ekhoneni likaChurch St noDr Pixley kaSeme Street (okwakungu-West Street)
Old Durban Central Prison – Sentele: ekhoneni likaWalnut Rd noDr AB Xuma St (okwakungu-Commercial Road)
Isikhumbuzo sikaDr Mohambry “Monty” Naicker: KuMonty Naicker Street
Security Branch office: 9 Masobiya Mdluli Street (okwakungu-Fisher Street)
1906 Bhambatha Prisoner of War wall: Ballard Street, Durban Point
African Bathing Beach: Snell Parade
Resistance Park: Umbilo Road
The International Printing Press and Indian Opinion offices: Mercury Lane
← Kesval ‘Kay’ Moonsamy (5 July 1926-21 June 2017)